Ihe ndi di elu maka ekwenti ekwenti nke oma | Martech Zone
Oge agafeela mgbe ịmịpụta ọdịnaya buru ibu zuru ezu. Ndị otu nchịkọta akụkọ ga-eche maka etu esi ekesa ha nke ọma, na itinye aka na ndị na-ege ntị na-eme ka akụkọ ahụ.
Kedụ ka ngwa ngwa mgbasa ozi ga - esi (ma jigide) ndị ọrụ ya? Olee otú gị metrik jiri tụnyere nkezi nke ụlọ ọrụ? Pushwoosh enyochaala mgbasa ozi mgbasa ozi nke 104 na-arụ ọrụ akụkọ akụkọ dị njikere ma dị njikere inye gị azịza.
Kedu ihe bụ ngwa ngwa mgbasa ozi kachasị?
Site na ihe anyị hụrụ na Pushwoosh, ihe ngosi mgbasa ozi ntinye na-atụnye ụtụ dị ukwuu na ihe ịga nke ọma nke ngwa mgbasa ozi na itinye aka na onye ọrụ. Oge anyi inyocha ọkwa benchmarks nyocha kpughere:
Ogologo pịa-site ọnụego (CTR) maka ngwa ngwa ngwa ngwa bụ 4.43% na iOS na 5.08% na gam akporo
Ogologo opt-in ọnụego bu 43.89% na iOS na 70.91% na gam akporo
Ogologo ugboro ole nke izipu ozi bụ 3 pushes kwa ụbọchị.
Anyị ekwupụtala na, na opekata mpe, ngwa mgbasa ozi nwere ike inweta:
12.5X elu pịa-site udu na iOS na 13.5X elu CTRs na gam akporo;
1.7X elu opt-in ọnụego na iOS na 1.25X ọnụọgụ ọnụọgụ dị elu na gam akporo.
N'ụzọ na-akpali mmasị, ngwa ọdịnala mgbasa ozi nwere usoro ntinye aka nke ndị ọrụ kachasị elu nwere otu ụdị nkwuputa mgbasa ozi: ha na-eziga 3 ugboro kwa ụbọchị, dị ka nkezi.
8 Ihe Na-emetụta Mobile App Engnye Aka Njikọ
Kedu otu ngwa ngwa mgbasa ozi na-eduga iji nweta ndị na-agụ ha na n'ụzọ dị irè? Lee usoro na ụkpụrụ Pushwoosh gosipụtara.
Ebumnuche 1: A na-ewepụta Ọsọ Akụkọ na Notma Ọkwa Mgbasa
Chọrọ ịbụ onye mbụ ịkwụsị ozi ọma - nke a nwere ezi uche, mana kedu ka ị si eme ya?
Jiri oke ọsọ ọsọ push ngosi teknụzụ iji zipu ihe ngosi 100X ngwa ngwa karịa nkezi
Site na ahụmịhe anyị, mgbe ngwa ngwa ngwa na-eme ka nnyefe ozi ngosi ha kwalite, ha CTR nwere ike iru 12%. Nke a dịkarịa ala okpukpu abụọ nke nkezi anyị kpughere na nyocha data anyị.
Mee ka nke a mara usoro ndezi n'ihi na izipu push ificationsma Ọkwa
Jide n'aka na ịkwalite ọdịnaya site na ịkwanye ngwa ngwa ma dị mfe maka onye ọ bụla n'ime otu ngwa ngwa mgbasa ozi gị. Họrọ sọftụwia nkwanye push nke na-enye ohere ikesa ozi na longreads n'ime nkeji - n'amaghị etu esi ede koodu. N'ime otu afọ, ọ nwere ike ịchekwa gị ụbọchị asaa zuru oke!
Ebumnuche 2: Ntinye Ntinye Omenala ozugbo maka ushma Ọkwa
Nke a bụ aghụghọ dị mfe: jụọ ndị na-ege gị ntị olee isiokwu ọ ga-amasị ha ịgwa ha banyere ya kama ịjụ ma ha chọrọ ịnata ọ bụla Ịma Ọkwa ma ọlị.
Na ntụpọ, nke a ga-hụ na a elu opt-na ọnụego gị na ngwa. Na-esote, nke a ga-enye ohere maka nkewa granular karịa na ịchebe ziri ezi. Won'tgaghị eche ma ọdịnaya ị na-akwalite dị mkpa - ndị na - agụ ya ga - enweta ọdịnaya ha wepụtara onwe ha nke ọma! N'ihi nke a, ntinye aka gị na njigide usoro ga-eto.
N'okpuru ebe a bụ ihe atụ abụọ nke ndenye aha na-egosi na ngwa CNN na-emebi US & World News (n'aka ekpe) na USA Today ngwa (n'aka nri).
Kpachara anya, agbanyeghị: mgbe ịchọrọ itolite a ezi-sewaa isi nke opted-na ndị ọrụ, ị nwere ike ọ gaghị achọ ịbawanye ndepụta nke ndị na-edebanye aha gị na ntinye aka.
Ihe omumu data Pushwoosh egosiputala na onu ogugu di elu abughi ihe kwesiri ntukwasi obi maka itinye aka na ndi oru gi na nkwukọrịta gi.
Nweta? Nkesa bụ igodo, yabụ ka anyị nọrọ na ya.
Ihe 3: Push Notification User Segmentation
Iji mee ka ndị na-ege ha ntị dịkwuo elu, ngwa mgbasa ozi ndị na-eduga na-elekwasị anya na ọkwa ha dabere na njirimara onye ọrụ (afọ, mba), mmasị ịdenye aha, oriri ọdịnaya gara aga, na omume ezigbo oge.
Na ahụmịhe anyị, otu a ka ụfọdụ ndị mbipụta siri bulie CTR site na 40% yana ọbụlagodi 50%.
Ihe kpatara 4: Push Notification Personalization
Nkeji enyere aka ị mata ọdịmma nke ịgụ akwụkwọ gị. Nhazi onwe, ka ọ dị ugbu a, na-enyere aka ndị na-ege gị ntị mata ngwa mgbasa ozi gị n'etiti ndị ọzọ niile.
Hazie ihe ọ bụla nke ngwa mgbasa ozi nke ngwa mgbasa ozi gị iji chọpụta - site na aha ya na ụda nke na-egosi nzipu ozi gị.
Elements nke a push ngosi na ike ga-ahaziri
Tinye mmetụta uche na emojis (mgbe ọ dị mkpa) ma hazie onyinye ndenye aha site na ịmalite aha onye ọrụ. Site na ọdịnaya dị ike dị otú a, ọkwa ịkwanye gị nwere ike ịnweta mmụba 15-40% na CTR.
Ihe nlere anya nke onwe nke ihe egwu nke media nwere ike izipu
Ebumnuche 5: Oge Ntugharị Ntugharị
Dabere na ọnụọgụ ndị anyị chịkọtara na Pushwoosh, CTR kachasị elu na-eme na Tuesday, n'etiti 6 na 8 elekere ndị ọrụ 'oge mpaghara. Nsogbu bụ, ọ gaghị ekwe omume maka ngwa ngwa mgbasa ozi ịtọọ ọkwa niile maka ọkwa a. Ọtụtụ mgbe, ndị nchịkọta akụkọ enweghị ike ịhazi ọkwa mgba ha tupu oge niile - ha ga-ebufe akụkọ ozugbo ọ mere.
Ihe ọ bụla ngwa ngwa ọ bụla nwere ike ime, bụ ịchọpụta oge mgbe ndị ọrụ ya kachasị adịkarị mfe pịa ọkwa ma gbalịa ịnye echiche na ịgụ ogologo oge. Ndụmọdụ ole na ole ịga nke ọma:
Tụlee oge nke ndị na - agụ akwụkwọ gị
Debe oge agbachi nkịtị
A / B oge ule na usoro nyefere
Jụọ ndị na-ege gị ntị ozugbo - dị ka ngwa SmartNews nke nabatara ndị ọrụ ọhụụ na ndenye aha na-arịọ mgbe ha masịrị ịnata nkwụsị
Nke a bụ otu ngwa ngwa mgbasa ozi nwere ike isi dozie nsogbu ahụ site na ọkwa na-enweghị oge na nke a na-egbupụghị, belata mbupụ ma mekwuo njikọ ndị ọrụ.
Ebumnuche 6: Push Notification Frequency
Ka ndị na-agbanye ngwa mgbasa ozi na-eziga, CTR dị ala ha na - - na ntụgharị: ị kwenyere na nkwupụta a bụ eziokwu?
Ihe omumu ihe omuma nke Pushwoosh egosiputala na oge nkwuputa uzo na CTR adighi adabere na ibe ya - karia, enwere mmeghari mgbanwe di n'etiti uzo abuo.
Ihe bụ, ndị a bụ ndị na-ebi akwụkwọ nta ka ha ziga obere ihe ọ bụla kwa ụbọchị - n'ọtụtụ ọnọdụ, ha enweghị ike ịnweta CTR dị elu n'ihi na ha enwetabeghị nghọta zuru oke banyere mmasị ndị na-ege ha ntị. Nnukwu ndị nkwusa, n'ụzọ dị iche, na-eziga ihe ngosi 30 kwa ụbọchị - ma n'agbanyeghị nke ahụ, dị mkpa ma na-ekere òkè.
O doro anya na, ugboro ole okwu, ma ị ga-anwale iji chọpụta ezigbo kwa ụbọchị ọnụ ọgụgụ nke pushes maka gị ngwa ngwa ngwa.
Ihe ndabere 7: iOS vs. Android Platform
You chọpụtala na CTR dịkarịsịrị elu na gam akporo karịa na iOS? Nke a bụ nnukwu n'ihi ọdịiche dị n'etiti UX nyiwe.
Na gam akporo, ihe onye ọrụ na-ahụ anya: ha na-arapara n'elu ihuenyo ahụ, onye ọrụ na-ahụkwa ha oge ọ bụla ha wedatara drawer ngosi ahụ.
Na iOS pushes bụ naanị anya na lockscreen - mgbe ngwaọrụ agbachi, pushes ga-ezo na ngosi center. Na njirimara ọhụrụ na-egbochi ma Ọkwa na iOS 15, ọtụtụ alerts ga-nke ọrụ 'na-elekwasị anya.
Rịba ama na ọnụ ọgụgụ nke ndị na-agụ ị nwere ike itinye aka na nkwupụta ọkwa na iOS na gam akporo ga-adị iche site na mba ọzọ gaa na mba ọzọ.
Na UK, ọnụọgụ ndị ọrụ iOS karịrị oke nke ndị ọrụ gam akporo naanị na Septemba 2020, ma ugbu a ndị na-ege ntị nke nyiwe mkpanaka fọrọ nke nta ka ha nhata.
Na US, ọ bụ ezie Ndị ọrụ iOS karịrị ndị nwe ngwaọrụ gam akporo site na nkwụsi ike 17%.
Nke a pụtara na ọnụ ọgụgụ zuru oke, ngwa mgbasa ozi nwere ike ịnweta ọtụtụ ndị ọrụ iOS na-etinye aka na US karịa na UK. Buru nke a n'uche mgbe ị na-atụle ntinye aka gị metrics na mba dị iche iche ma ọ bụ benchmarking.
Ebumnuche 8: Nnweta vs Njikọ Aka Tweaks
Pushwoosh data na-egosi na CTRs kachasị elu mgbe ngwa mgbasa ozi nwere 10-50K na ndị debanyere aha 100-500K.
Na mbu, ntinye aka nke onye ọrụ mgbe mgbasa ozi enwetaworị ndị debanyere aha 50K mbụ ya. Ọ bụrụ na ngwa mgbasa ozi na-aga n'ihu na-elekwasị anya na mgbasawanye ndị na-ege ntị, CTR na-adaba n'ụzọ nkịtị.
Agbanyeghị, ọ bụrụ na onye mbipụta akwụkwọ na-ebute ọrụ onye ọrụ ụzọ na-achọ onye ọrụ, ha nwere ike weghachite CTR ha dị elu. Ka ọ na-erule oge ngwa mgbasa ozi na-achịkọta ndị debanyere aha 100K, ọ na-enwekarị usoro nke ule A / B ma mụta ihe ndị na-ege ha ntị chọrọ nke ọma. Onye nkwusa nwere ike itinye nkewa omume ugbu a ka ọ dịkwuo mkpa maka ọkwa ịkesa na ọnụego aka ha.
Kedu Usoro Nkwupụta Mgbasa Ozi Ga-eme Ka Ndị Na-agụ Akwụkwọ Gị Bido?
Got nwere a ndepụta nke ihe na-akwalite ọrụ njikọ aka na 104 media ngwa ọdịnala 'notma Ọkwa. Olee ụzọ ndị ga-akacha dị irè nye gị? Nnwale na A / B ule ga-agwa.
Dabere na atụmatụ gị na nkewa na nkeonwe ụkpụrụ. Rịba ama ụdị ọdịnaya mejupụtara ndị na - agụ akwụkwọ gị kachasị. Na ngwụsị nke ụbọchị, ihe ndị bụ isi nke ọrụ nta akụkọ na-arụ ọrụ na ngwa ngwa mgbasa ozi - ọ bụ ihe niile gbasara ịnye ndị na-ege ntị ziri ezi ozi bara uru ma mee ka ha tinye aka.
Pushwoosh bu uzo eji akpaka ahia na-enye ohere izipu ozi kpọbata ọkwa (mkpanaka na ihe nchọgharị), ozi ngwa, ozi ịntanetị, yana nkwukọrịta ọtụtụ mmemme. Na Pushwoosh, ihe karịrị azụmaahịa 80,000 gburugburu ụwa emeela ka ndị ahịa ha nwee mmekọrịta, njigide, na uru ndụ ha niile.
Nweta Pushwoosh Demo
Tags: androidna-ngwa oziiosiOS na gam akporomobile ngwaitinye aka na ekwentị mkpanaakamobile ngwa izi ozimobile ngwa push notma Ọkwapush ngosipush ngosi ctrinupụ ngosi ihepush ngosi ugboropush ngosi opt-in udupush ngosi njikarịchausoro nhazi usoropush ngosi nkewapush ngosi ọsọpush ngosi ọnụ ọgụgụoge ngosi ogePushwoosh